मतदाताहरुमा समेत पैसामा बिक्ने गरेका कारण इमान्दार मानिसले राजनीति गर्न नसक्ने खनालको निश्कर्ष | Seto Khabar
मतदाताहरुमा समेत पैसामा बिक्ने गरेका कारण इमान्दार मानिसले राजनीति गर्न नसक्ने खनालको निश्कर्ष
२ चैत, काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नयाँ शक्ति पार्टी परित्याग गरेका छन् । उनले अब कुनै राजनीतिक दलमा सामेल नहुने घोषणा गरेका छन् । बाबुराम भट्टराईले गुट व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य गुमाइसकेको र मतदाताहरु समेत पैसामा बिक्ने गरेका कारण इमान्दार मानिसले राजनीति गर्न नसक्ने खनालको निश्कर्ष छ ।अनलाइनखबरले सम्पर्क गर्दा शुरुमा खनालले राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्न अस्वीकार गरे । तर, राजनीतिक विषयमा अन्तिम कुराकानी हुने शर्तमा उनले नयाँशक्ति परित्याग गर्नुपर्ने केही कारणहरु खोले ।
नयाँ शक्ति पार्टीबाट राजीनामा नै दिइसकेको हो ?मैले राजीनामा दिने आवश्यकता नै ठानेको छैन । किनभने, ६/७ महिनादेखि म सक्रिय पनि छैन ।
छाडेको चाँहि किन ?
नयाँ शक्ति पार्टीमा मुख्य समस्या केके रहेछ ?
मैले भन्नुपर्ने होइन । हाम्रो धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र अध्ययन गर्दा आचरण सम्वन्धी पर्याप्त चर्चा पाइन्छ । हाम्रो शास्त्रअनुसार मानिसमा हुनुपर्ने, आचारण, स्वभाव र गुणहरु सबै त्याग्न सकियो भने बल्ल मान्छे राजनीतिज्ञ हुने रहेछ । मैले त्यो आचरण त्याग्न सकिनँ ।
विशेष समस्या के भने माओवादी पार्टीमा जुन राजनीतिक चरित्र पहिले थियो, त्यो राजनीतिक चरित्रमा कति पनि सुधार आएन । बरु विकृति त्यो भन्दा बढी हावी हुँदै गयो । चन्दा आतंकदेखि गुटगत राजनीतिमा त्यही हावी हुँदै गयो ।कुरा गर्दा समतामुलक, सबैलाई समावेशी गर्नुपर्छ भन्ने र पार्टी चलाउने बेला आफ्नो मान्छेहरु मात्रै नजिक राख्ने भएपछि समावेशी, समतामुलक भएन नि ।प्रत्येक राजनीतिक दलको समस्या, नारा निकै आदर्शवादी बनाउने, त्यस्तै कुरा गर्ने, काम त्यसको ठ्याक्कै उल्टो । नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि देखिएको समस्या यही हो ।
एकदमै धेरै । गुट त जिल्ला-जिल्लामा पुगेको छ । पहिले गाउँ तहसम्म इकाइ नै थिएन । जहाँ संगठन बन्छ, त्यहाँ कि वामदेव गुट, कि देवेन्द्र पौडेल गुट, कहीँ गंगा श्रेष्ठ गुट हावी हुन थाल्यो । हामीले राजनीतिक नेतृत्वमा जुन राजनीतिक चरित्र हुनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौँ, त्यो पाइएन । सबै चरित्र त्यागेर राजनीतिलाई उद्योग बनाउने, व्यवसाय बनाउने, कमाउने भाँडो बनाउने चरित्र हावी हुँदै गयो ।हुन त यो नयाँ शक्तिमा मात्र होइन, सबै दलमा देखिएको समस्या हो । तर, नयाँ शक्तिमा त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने मेरो विचार रहेको थियो ।
बाबुरामजीले गुट राजनीति म्यानेज गर्ने सामथ्र्य पहिले नै गुमाइसक्नुभएको रहेछ । सायद पहिले कुनैबेला उहाँको पनि त्यस्तो काममा संसर्ग भएको थियो होला । जुन व्यक्तिलाई पहिले उहाँले प्रोटेक्सन दिनुभयो, जुन व्यक्तिले सुरुमा उहाँलाई प्रोटेक्सन दिए, ती व्यक्तिलाई त डाक्टर सापले पनि क्षमा त दिनै पर्‍यो जस्तै गल्ति गरे पनि । उहाँ त्यसरी सबैलाई क्षमा दिनतिर लाग्नुभयो कि भन्ने लागेको छ । उहाँको काम गराइबाट यही देखिन्छ ।उहाँसँग अहिले पनि कुराकानी हुँदा निकै आदर्शवादी कुरा गर्नुहुन्छ, मैले बुझेको छु, सुधार गर्नुपर्छ, यस्तो समस्या हटाउनुपर्छ, मैले बुझेको छु भन्ने तर पछि गएर तिनै मान्छेहरुलाई अगाडि बढाउने, उनीहरुलाई नै बढी विश्वास गर्ने स्थिति रहृयो ।
निर्णयहरु गोजीबाट आउँछ । लोकतान्त्रिक विधिमा त छलफल गरेर मात्र निर्णय हुन्छ, दिनभरि चार/पाँच घण्टा छलफल गर्‍यो, अन्तिममा निर्णय खोजीबाट खुर्लुक्क झरेर अर्कै आउँछ । त्यहाँ साथीहरुले माओवादी हुँदादेखि नै चलेको चलन हो, बोल्न सबैले पाउँछ, निर्णय अर्कै आउँछ भन्ने गर्थे । यस्तो संस्कार छोड्यौं भन्दा उहाँहरु त्यो छोड्न पनि तयार हुनुभएन ।
रविन्द्र मिश्रले खोलेको ‘साझा पार्टी’ मा नजाने ?
म त राजनीतिमा लाग्दिनँ । रविन्द्र जीलाई शुभेच्छा छ । तर, नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कार भएको पार्टी नै चाहिन्छ । पुराना पार्टीले केही गर्दैनन् । खास गरी विभाजनकारी, गुटगत संस्कार हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरुमा छ, त्यसबाट उहाँ बच्न सक्नुपर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विनाको राजनीति, पैसाको राजनीति, चरित्रहीन राजनीतिबाट मुक्त हुन नयाँ राजनीतिक संस्कारको पार्टी चाहिन्छ । तर, मैले चाँहि राजनीति छोडेँ ।
एक दुई ठाउँमा परिवर्तन आउँला, तर नेपालका गाउँहरुबाट मतदाताले असल राजनीतिक संस्कार भएका दलहरुलाई अगाडि बढाउलान् भन्नेमा विश्वास लाग्न छाडेको छ । त्यसैले मेरो बाँकी जीवन शान्त तरिकाले बिताउने निधो गरेको छु ।